Usuku olumnandi levalentines i phambili ku 14 EyoMdumba 2018. Ukuba umntu ugqiba lukaValentine Day 2018 njengoko imini apho uthando ibhiyozelwa nge Usuku lwezithandani amakhadi Usuku lwezithandani izipho kwaye Usuku lwezithandani imifanekiso, Usuku lwezithandani Wallpapers Usuku olumnandi levalentines i-SMS.
Ukuba lukaValentine Day ngoko musani kuba ngumhla yokubhiyozela for ngaphandle ukuthandana nje?
"Enyanisweni sifumana uthando amaqashiso amasiko kunye neemeko, kunye uhlobo lothando oluhambelana wazifincelela ebomini bomntu, akusoloko lezibini uthando 'ukuba kakhulu lubhiyozelwa usuku lwezithandani. A Umbhali wathi. "Amasiko ethu angundoqo izele uthando lwezithandani. Ingakumbi pop nomculo umboniso kudala kucingwa ukuba uthando ukuba Xenikweni kwesi sikhokelo. Savelisa kakhulu ezinye iimodeli, kwaye kusenza oyimfama kwezinye iintlobo uthando, "Kuchaza Jens W. Pedersen, Bacinga ukuba kubalulekile ukukhumbula ukuba uthando kufunwa kwaye ziyenzeka nangezinye iindlela:"Uthando ezifana kunokuba yinto ngokomoya, uthando ukuphila ngokwako, ukuba intsapho okanye abahlobo "
Abaninzi abaye bafunda ngayo Usuku olumnandi levalentines 2018 ucinga ukuba kukho umbingeleli ukuba uphikisana kunye uMlawuli waseRoma uKlawudiyo II ngubani avalwa abafana ukuba atshate xa babeza kuba amajoni. Umfundisi St. Valentine waqhubeka ukutshata izibini waza ekugqibeleni wabulawa ngenxa yokuya umthetho lo mlawuli.
Izinto Ukuze enze ku Usuku olumnandi levalentines 2018 Nge Valentine Yakho.
Bhala ileta uthando eshushu
Kwimitshato emininzi, kukho Akunakufane ixesha ukuxelela abanye ngazo zonke izinto esizithandayo ezintsha esizifumanisayo Nobomi yethu kunye. Thatha ixesha ndizama ukudibanisa uthando lwakho nokonwabela, uqambe ileta uthando umhlobo wakho intombazana okanye iqabane ku Usuku olumnandi levalentines 2018.
Amava wezenkcubeko Valentines zakho
Yokwabelana Amava Zinxibe ndawonye kwaye liye laba lilitye lesiseko ubudlelwane. Kummangalise / yakhe amatikiti ekhonsathini ephilayo, theatre, opera okanye movie kumnandi.
Hlela yepikniki On The Living Floor Room
Sasaza ingubo wepikiniki emgangathweni igumbi ophilayo, beka ezininzi ezintofontofo kunye babeke, laneliswe yeTapas kwakunye MaNcuthu ndawonye. Iseva uyayithanda ngezithako ezifana Chili, ginger, igalikhi, vanilla intlama. Bane, ezifana chocolate emnyama, ginger abamnyama, butter ibhotolo kunye neeamangile, kwabalelwa ukwandisa lwakhuthaza. Spice up nge iimbatyisi, amakhiwane fresh, bananas, avokhado kunye nezinye iimeko ezinokuba ukunxibelelanisa inkanuko.
Flowers for Valentines yakho
'Yitsho ezimbalini'. Khangela ukubaluleka nentyatyambo xa ngaphambi ngokukhetha isipha Valentine wakho 2018.
Upheke / menu sakhe asithandayo. Yenza kube lula olusenyongweni kunye ofudumeleyo eninzi amakhandlela, iintyatyambo, umculo kunye nelaphu layo phezu kwetafile.
Nika Yena / Unyawo wakhe Massage
Ingaba into ethile olusenyongweni ngokupha nokufumana unyawo yokuthanjiswa? Mhlawumbi ngenxa yokuba Iinzwane akunakufane isihloko ingqalelo ngothando, mhlawumbi ngenxa yokuba uninzi lwethu a bit eqhelekileyo xa kuziwa iinyawo zethu. Kodwa umyalezo unyawo, isethi eshushu, izandla zothando, nangesandla kwaye umphululela unyawo, kungenziwa wagqogqa umzimba lonke. Chithani namafutha ethile elungileyo, kwaye ugcine xa kukho imfuneko. Hlikihla phezu amaqatha zakhe iingalo.
Yinto emnandi ukuze udlale, nokuba sele babehlala kunye kubudlelwane amashumi eminyaka. Emlenzeni kunye ukudlala ngothando indlela elungileyo sayifumana yintlantsi kunye nabanye. Flirt yindlela entle uxelele iqabane lakho ukuba basondele kuye - ngaphandle kwakho usoloko ufuna ukusebenzisa igama elilodwa.
Cofa ngezantsi amalinki ngokufumana izipho ezimangalisayo valentine, umzekelo: Usuku olumnandi levalentines images, Umfanekiso ,imiyalezo, Usuku olumnandi levalentines videos, izipho ezininzi.
Facebook DP valentine day
Valentine ngosuku IsiNgesi SMS 2018
Valentine day SMS 2018 ukuze Girlfriend
Valentine day SMS abangani 2018
Valentine day SMS indoda 2018
Romantic Quotes Kuba indoda Images 2018
Imiyalezo Valentine Day Picture 2018
Valentine ngosuku Picture SMS 2018
Happy Day Valentines GIF yoopopayi 2018
Usuku Valentines Happy Alyce ezipheleleyo 2018
Valentines Happy Day isimeli-nobumba 2018
Izipho Day Valentines Happy 2018
Valentines Happy Day Cards 2018
Valentines Day Cards Ngokuba kuye 2018
Valentines Day Cards kuye 2018
Valentine Day Cards isoka 2018
amakhadi ngosuku valentine for Ndonakele 2018
Usuku Card Valentine For umama 2018
amakhadi Usuku Valentines uDade 2018
Valentines Day Cards Kuba umakoti
Valentines Day Cards Ngokuba nabo 2018
Valentines Day Cards For UMAMA 2018
Valentines Day Cards umfazi 2018
Valentines Day Cards For Mhlobo 2018
Valentine Day Wallpaper ne Shayari 2018
Usuku Valentines Happy My Love 2018
Usuku Valentines Happy I Love You
Week Valentine List 2018, 7 Days of Usuku olumnandi levalentines imihla:
Ewe siza inyathelo elinye ukusondela ukuba imini Happy lweValentina 2018! Valentine suku yaziwa ukuba yazise ngamnye umzuzu othile iinkumbulo zethu emangalisayo. Le yiloo mini ukuba sigcine iinkumbulo eshushu uthando lomntu ezimbini abangaziwayo ngubani emva koko waba ngumphefumlo enye. LukaValentine Day nje njengoko njengesizathu uhlamba ezinye uthando chatha kwaye ezongezelelweyo ngakumbi uthando kumntu omnye lowo awukwazi ukucinga ubomi bakho ukuba okanye hayi ke ukuba umama okanye utata wakho njengoko siyazi ukuba umama kunye notata zethu zisoloko wethu oyinhloko uthando. LukaValentine Day nje omnye umhla kubathandi okwenyaniso abo bachithe usuku ngalunye besonwabela izithandwa zabo phezu ngosuku phambi. kunjalo, le mini valentine lubhiyozelwa ukuba awongamela uthando phakathi imiphefumlo ababini ukuba bakhokile ngemihla roughest yobomi babo okanye nabo bonke abasandula uthando omnye nomnye okanye abo amaqabane umphefumlo oluyinyaniso, kodwa ayikwazi ukufumana ndawonye ebomini, Usuku lwezithandani isizathu sokuba wonke umntu uyathandana kwaye incasa Sweetest uthando ufuna ukugubha ubomi ngokusebenzisa enye yazo ethile.
Ukuba sithethe malunga 14 ngomhla February lweValentina, kukho ukhethekile epheleleyo 7 kweentsuku kubathandi ngenyanga kaFebruwari aka kwiveki uthando eyaziwa ngokuba uthando veki Valentine kunye neentsuku ezithile Februwari leyo luqala nge Usuku Rose ilandelwa ngu Phakamisa Day koko Chocolate Day koko Day Teddy kamva kulandele Day Promise koko Day Hug kunye Okokugqibela kodwa okunga kuncinananga Kiss Imini ngosuku lokugqibela inqununu iza lukaValentine Day. Ukuba loo madoda namabhinqa abangayiqondiyo le nto 7 iintsuku valentine schedule ngeveki, Kubo siye wenza umhla sheet komKristu uNyangelemihla veki lweValentina ukuze efanelekileyo.
Week Valentine List 2018 Days Usuku olumnandi levalentines imihla:
LukaValentine Week Days Umhla 2018 7 Days of Valentine Week
7th Feb 2018 (uLwesithathu) Usuku Rose (1st Usuku lwezithandani)
8th Feb 2018 (uLwesine) Phakamisa Day (2makabuyele Usuku lwezithandani)
9th Feb 2018 (uLwesihlanu) Chocolate Day (3rd Usuku lwezithandani)
10th Feb 2018 (uMgqibelo) Usuku Teddy (4th Usuku lwezithandani)
11th Feb 2018 (iCawe) Usuku promise (5th Usuku lwezithandani)
12th Feb 2018 (uMvulo) Day ukwanga (6th Usuku lwezithandani)
13th Feb 2018 (uLwesibini) kiss Day (7th Usuku lwezithandani)
14th Feb 2018 (uLwesithathu) Usuku lwezithandani (ngosuku-V)
uluhlu ngeveki I lweValentina & sheet yazo umhla ube ukubaluleka zabo. Makhe ukubaxa inyaniso emva kwezi lonke Valentine iintsuku zeveki kuhlu yaye kutheni na sibhiyozela le 7 imihla valentine.
7 Days of Valentine & Oko Siza Yenza Malunga Lo Days
Usuku Rose 2018: kutheni uninzi izibini ingaba ukuba indoda okanye umfazi, zokuthandana, yinto yokuba uphawula ukuqala kweveki Valentine phezu 7 EyoMdumba. Rose nentle inikwa ukuvakalisa ukuba nemvakalelo yothando omnye komnye. Njengoko ebomvu ubizwa ngokuba uphawu lothando, ngoko ke ukuqala kwiveki lwabo uthando.
Phakamisa Day 2018: Yeyona ngomhla wesibini weveki Valentine kwaye olu suku lubhiyozelwa kwi 8 February ukususela kwinyathelo elilandelayo. Ngale mini ukuba izithandwa okanye amadoda lubonisa ukuba intombi yabo ekhethekileyo okanye iqabane kunye lokudala yabo kakhulu & style unique.
Chocolate Day 2018: ke kufike usuku olulandelayo weveki valentine kaThixo lubhiyozelwa 9 EyoMdumba. Emva kokuba uthatha icebiso, ngomhla olandelayo zizakubalulwa nusa uthando ngokubonelela iitshokolethi shape intliziyo Inomtsalane.
Usuku Teddy 2018: emva kokuba ngosuku chocolate, neziqu zabo teddy imini yiloo mini sesine weveki valentine xa ena 10 EyoMdumba. Isizathu namhla ibhiyozelwa enye yezi lokubonisa uthando lwabo kunye teddy cute.
Usuku promise 2018: Promise ngosuku elandelayo 11 February njengoko kunjalo ngomhla wesihlanu V. Evekini kule mini izibini eyisingela uthando lwabo omnye komnye. Guys uthembisa ukuba nabo phakade kunye hlobo isithembiso.
Day ukwanga 2018: kamva ezithembisayo, koko kuza imini opo leyo ngemini yesithandathu kweveki Valentine 12 EyoMdumba. Njengoko igama ngokwayo ichaza, izibini kufuneka ukwanga ambathe omnye.
kiss Day 2018: apha usuku kiss ku 13 February lowo ngomhla wesixhenxe kwiveki valentine kwaye kubonakala ukuba le mini mini ibalulekileyo kuba unako ukucela kiss yakho yokuqala, xa kuphakanyiswa nje zakhe.
Usuku olumnandi levalentines 2018: e wokugqibela ngomhla ebonakalayo efika ku 14 EyoMdumba. Yeyona olumnandi kakhulu elifana kakhulu kuzo zonke abathandi, Izibini kunye nomfazi Valentine Day ibonelela ngamnye ukuvakalisa uhlobo zabo ezizizo uthando kumntu ezizodwa.
Emva uhlamba kwishawa uthando iveki yonke kufike inxalenye ephambili abantu abakholelwa uthando okanye amadoda nabafazi bahlekisa usuku lwezithandani kakhulu abantu abangatshatanga yaye ukudumba anti uthando okanye abantu awunazo ezinye umntu valentine lwabo, kwiveki kulandelwa ifana indumasi anti veki Valentine okanye ezihlekisayo isihloko iintsuku Valentines.
ngeveki Anti lukaValentine Umhla Usuku uluhlu Iveki imini Anti lweValentina 2018 Days of Anti Valentine
15th Feb 2018 Usuku ngempama uLwesine
16th Feb 2018 Khaba Day uLwesihlanu
17th Feb 2018 amafutha Day uMgqibelo
18th Feb 2018 Usuku Yothando iCawe
19th Feb 2018 Usuku Ukuvuma uMvulo
20th Feb 2018 Usuku Missing uLwesibini
21st Feb 2018 Hlukala uLwesithathu
Kwiveki anti-valentine okanye ezimbini 7 Days Ukulandela Usuku lwezithandani baye ngempama ngosuku 15 Februwari, ukukhaba ngosuku 16thFebruary, imini isiqhumiso phezu 17 February, ngosuku wokudlala 18 February, imini izono on 19 February, ngosuku engekhoyo nge 20 February kunye lekhefu yokugqibela nge- 21 February.
Usuku lwezithandani yaziwa ngokusebenzisa ihlabathi phezu 14 Februwari kunyaka ngamnye. Usuku lwezithandani ibhiyozelwa yi bonke abaye baba Love. Olu suku idume kakhulu omnye ulutsha uvuyo kakhulu kunye, ngehlombe injabulo. Iveki Valentines kuqala 7 Februwari yaye ziya kuhlala kude 14 February. Suku ngalunye of Valentines Iveki lubhiyozelwa ngendlela ekhethekileyo emele isiganeko ekhethekileyo zizakubalulwa ukwenza iVeki Valentine ekhethekileyo ngendlela yonke ivele. Bonke abantu eluthandweni ulinde ngokuba le mini ndiwakhumbule abo babathandayo kwaye bazive unique.
Usuku lwezithandani leyo eneneni olona suku ilindelwe yi abangabathandi ehlabathini lonke ihlabathi apha ukuza. Ngalinye abathandi ngentumekelelo elindele kule mini njengoko kunjalo namhla ubanika ithuba esemthethweni lokubonisa uthando lwabo ku eyo yabo. Usuku lwezithandani ukuba buthi-14 Februwari ngonyaka landulelwa nge veki valentine xa. Valentine veki 2018 okusuka feb 7. kule veki ukusuka 7 ukuya kowe-14 ikwabizwa ngokuba uthando ngeveki okanye uthando ngeveki. I-Valentine ngeveki sheet uqala ngaphandle Februwari 7 ngoLwesithathu ukuqalela ngomhla nokwanda. Apha ngezantsi kunikwe ingqokelela ngokupheleleyo Valentines iintsuku zeveki 2018.
Valentine Week Days Imihla 2018:
Usuku Rose 2018:
Rose ngosuku lunomahluko ngokubonelela amahlathi ukuya kwenye. Kwanabo eza uthando umnikelo ebomvu ababathandayo. nje namhla yayo ibimele ukuba abathandi. Olu suku kuthiwa phakathi bangani. Umahluko kuphela ubuxoki ukuba zonke kombala oku kwandisa. Owayo phezu Februwari 7 kunye kalukhuni 2018 ngayo ukuba ukuwa phezu kwawo ngoLwesithathu.
ngeveki lukaValentine iqala Usuku Rose, njengoko ezimbali wayeza kuba ngokuqinisekileyo kukuzibophelela into othandekayo yaye ngokuqinisekileyo phakathi kwabo rose ngxi phakathi abawuthandayo wabo wonke umntu. Usuku Rose ibhiyozelwa yindyebo of yenzondelelo nehlombe enye abantwana ukuba azame ukubonisa uthando lwabo nje ukunikela banda. Ngoko ke ukulungiselela ukusebenzisa okwandileyo kwaye isipho ukuba uthando.
Ngale mini ke kunokwenzeka ukuba ukunika roses ebomvu pinki emthubi kubantu abohlukeneyo ngokuxhomekeke iimvakalelo yakho kubo. Flowers kwamathandabuzo izinto othandekayo ingundoqo eziqulethwe kwesi rose nje enye yezi ezazithandwa.
Happy Phakamisa Day 2018:
happy kuphakanyiswa ngosuku 2018
On Phakamisa imini uya kuthetha kuzityumza yakho nokubazisa kanye oko ukukholelwayo kubo ngqo. Wena kubonisa ukuba othandekayo wakho. Le yiloo mini 2 imini v ku kwiveki ngosuku. Isicelo eso kufuneka wadala ezizodwa ngokugcina engqondweni indawo ezingqonge kunye izipho. Oku kubalulekile ukuba unqwenela Yenza isindululo umtshato
Ihlale ngamadolo abo kwaye amalungiselelo kwindawo ezintle olusenyongweni yaye icebisa nabo babathandayo. Ukuba akukho ndlela ezichazwe ukubonisa eyakho enye omthandayo. Xa uthando umntu kuyinyaniso ngoko ukuba uqonde oko kunokubangela ukuba bazive ngokwenene bonwabile unique. Ayikho into ebaluleke kakhulu ngakumbi xa kuthelekiswa umphefumlo enothando kakhulu, akunjalo.
Usuku Rose ukuba zilandelwe kufutshana yi Nokucebisa Day kwaye ngomhla wesi-2 kule veki Valentine. Ngale mini, nawe ngqo sengqondo uthando lwakho yaye uya vakalisa iimvakalelo zakho buqu himor yakhe. Ngoko ke ukulungiselela nge kraca elitsha Samangala ukuwusondeza uthando namhla Nokucebisa.
Inyama okanye ezinye epha dessert kuyamakha womba kunye ne isimo esibi. Nale mini niya kubasasazela ulonwabo ngokunikezela itshokolethi owuthandayo uthando lwakho uze wenze himor encomekayo wakhe.
Bonke abantu bayabenza naziphi na izinto ezingafani ngokukhawuleza thembi ukuba angakhetha yetshokholethi. Khumbula ukuba nanini na unika itshokolethi abathile esibathandayo okusemandleni abo zaso, ukuba chocolate abayithandayo. ngendlela, ukuba amathuba apho awukwazi ukuthetha iimvakalelo zakho ngokupheleleyo yakho ibonisa ngosuku, eyakhupha ngosuku chocolate lusuku lwakho okusemandleni ukuze sizuze loo.
Wonke uthanda chocolate, ukuze banikele bundle zabo abazithandayo kuzo ngetshokholeythi kunye nokudala bonwabe.
the ngosuku Chocolate of valentine lweveki edumileyo 9 Februwari kwakhona ukuba ukuwa phezu ngoLwesihlanu we 2018.
ngosuku chocolate happy 2018
Mhlawumbi yokwabelana uvuyo enika itshokolethi abantu akufuphi ebathandile abakhe. Ukongezelela kwezinye omthandayo intombi okanye umakhulu nototamkhulu nabantwana iqabane okanye isoka ke kunokwenzeka ukuba unike iitshokolethi intliziyo ezimilise ezikhethekileyo nemithambo kunye nezipho zenkqubo.
Usuku Teddy Happy 2018:
Malunga Teddy imini nabasunguli isipho abafazi babo teddy cute. Amantombazana uthando ezi zokudlala izinto ngokwenene ngcono kude. S O emva ubumnandi ezimbalwa chocolate, ngoko isipho teddy kuya kubangela intombazana bakho kakhulu ukonwaba kakhulu.
I Teddy Usuku idume ngayo 10 Februwari plus it lehla ngoMgqibelo 2018.
Oothedi abathathu baya kuba sipho Inomtsalane ukuba kunikwe umntu amthandayo. kuyenzeka ukuba ukugonwa xa miss umntu. ngamanye amaxesha ukuba hit up on ukuba siye nomsindo kwaye sinako memeza iintliziyo zethu ngezi.
teddy usuku 2018
Usuku Teddy kuncipha on February 10th, ngokuba le mini love birds kulo lonke ihlabathi ntetho uthando lwabo bonke oothedi Inomtsalane kanye cute. Siyazi sonke ukuba amantombazana kakhulu buso teddy bear kunye oothedi abathathu-nye phakathi isipho abaninzi intle ukuba kunikwa umntu amthandayo. Ngoku lixesha lokufumana imini emangalisayo ukubala kwi oothedi ukusuka valentine.
Usuku Promise Happy 2018:
suku isithembiso happy 2018
Bathi yenza izithembiso ngenxa kubudlelwane babo uzame kuma lwenkohliso ukuba izithembiso zabo akukho nto yonke into yenzeka. Siso eso isabelo engcono kakhulu bokuhlala ubudlelwane. Oko kamsinya nje zakuba abathandekayo baqale elindele eachother uze uqalise othembela eachother. Bebathembisa eachother ukuba afumane ukuzinikela epheleleyo. Athembisa ukuba ahlale enye ngesandla ngamnye nokuba njani mandundu kakhulu ukuba isimo.
izithembiso Ukwenza kukhona umsebenzi kodwa ukugcina ezi zithembiso onzima. Ulwalamano yangempela ukuba ezi ukugcina izithembiso zabo phambi kokuba isiphelo, kwaye kananjalo Linga ukuba ukugqiba isithembiso sabo. A uxhulumaniso nempumelelo kukuba abantu ungaze abasebenza nabo kwaye uzama ukulungisa izinto, kunjalo, Kwakhona ukuzama kufuneka ngokwenene ezivela macala omabini.
Usuku Promise uwa phezu 11 February. Promise yenza indima ebalulekileyo kubudlelwane kunye ukuzalisekisa isithembiso yi-2 nto zakho ezibalulekileyo ukufumana nobuhlobo obuhle. Ukwenza izithembiso ezinkulu akayi ukuchaza ulwalamano lwakho kodwa ukuzalisekisa ezi ngokuzinikela okukhulu kwaye nokugcina ukuzithemba sobubi elitshintshayo kubalulekile. Ngoko musani ukukholwa kakhulu kwaye uqhubeke ngaphambili kwaye wenze isithembiso kuthando, uya kubonisa ukuzahlulela nokugcina bonwabe lonke ixesha lobomi babo.
Izithembiso zilula ukudala kodwa kunzima ukugcina. Eyona nto ibhetele kakhulu ke ukuba wenze isithembiso kufuneka sibe luncedo xa bebonisa uthando lwethu uthando omthandayo omnye kummandla izithembiso imivuzo. kodwa, kukho usuku ngalunye ithathwa imini isithembiso ngemihla ngeveki valentine. Ngaloo ukudala izithembiso namhla sithembiso ke musa azalisekise nabo phambi ukwenza uqhagamshelwano anesibindi lwakho.
Usuku Hug Happy 2018:
ngosuku ukwanga happy
Opo imini intetho malunga ngokusebenzisa uvuyo ngokuthi nokugona abantu abasondeleyo obathandayo . Hayi nje obathandayo njengoko ngokundanga nje ukuba akwazi ndiqaqambe imini komntu.
Yonke imihla iwela phezu 12 Februwari Uninzi lwaba bantwana baya kukuvuyela namhla ngokupheleleyo. Lo izibonelelo imini ithuba exabisekileyo kuthi ukuba uthando ongunaphakade uthando lwabo ngokumanga tight nefudumeleyo.
Around Hug imini amaqabane ithe eachother. Bathi kuthanjiswa ngokwabo enye ingalo ngamnye. Imfudumalo kunye nentuthuzelo bakholelwa kule mzuzu ezizodwa bubaluleke. Ke ukuyiphotha eachother olwaluqine kuba ukuba yayo ixesha ebaluleke gqitha ebomini babo ukuze ngokwenene musa into eachother ukuba bashiye.
Silila kunjalo omnye uyabathuthuzela, kwenyusa uthando. nje kuphela ngawo ngemini yayo ezingamashumi amahlanu. Xa kwabathandekayo bakho awonwabanga, ukubabamba nje uze ubanike kiss tight. Liya kukhokelela ngokuqinisekileyo ukuba bazive ngcono kakhulu. Ukwanga inikeza imvakalelo ukuba akuwedwa. Oku ufundisa ukuba ndiphaya nawe. Liveza uxinezeleko. It kubonisa ukuba, kunjalo olukhohlisayo le meko kukuba, 'Uya kusoloko ukufumana umva wam'.
ngosuku Kiss Happy 2018:
ngosuku kiss happy 2018
Kiss Day kuncipha ku February 13, le yenye phakathi ngomnye olona suku emangalisayo, Ngokukodwa le Valentines veki. Ngale mini abathandi zithathele thuba liyimbunguzulu ukwabelana uthando lwabo ngokunika inkanuko ukuba valentine lwabo. Ingakumbi Kiss on nebunzi ngokwenene uphawu bokusebenza kwaye uxanduva. Zama eli binzana ubuncwane uthando, beyijika loo mini ibe ethandekayo nekulula.
Ngosuku kiss amaqabane kiss eachother. Olu suku luye mhlawumbi ngomhla langutana kakhulu umbono wabo. Khumbula loo mini oluthile. Ukwanga na isenzo sakho kakhulu Inomtsalane ukuba bathi love.Kissing abantu obathandayo inika ngothando olukhulu ovumelana. Oku eyodwa oko ukufumana le mini ngakumbi ekhethekileyo enibathandayo.
Kiss na uhlobo kakhulu engaqhelekanga esithi ukubonisa uthando. Oku kunokwenzeka ukuba uthi uthando amashumi amawaka ngeendlela kunjalo, uhlobo engcono kakhulu nkulumo kiss. Uya kufumana iintlobo ezizodwa kiss kuquka njengo Christmas kiss, lip imilebe kiss, kiss on kwebunzi.
Usuku olumnandi levalentines 2018:
Okokugqibela kodwa ngokuqinisekileyo hayi minimal Valentine i-Day lihla phezu Februwari 14, le yenye phakathi ngomnye olona suku ekhethekileyo ngokupheleleyo ngenxa eziliqela abo bantu ehlabathini lonke, abantu kweeklasi ubudala ezininzi ukubhiyozela le mini langa ebizwa Usuku lwezithandani.
Kukho nje othandwayo isithi "Musa ukulinda de kube kakhulu ixesha ukwabelana nomnye umntu nje kangakanani ngokwenene uyabathanda kuwe, wobeka phi na ngokwenene ukuba le. Ekubeni bemkile kunjalo kakhulu ukuba bangxole baze bamemeze, asoze abeva andisaphili. "Le yimini ibamba intabalala nkoka evuton'wini ezininzi ezimbalwa kweminwe. Ngoko nikela zezomntu wakho intanda namhla lonke, ukuya for mealsand athande bhanyabhanya uqhubeke ngenxa ukhwele elide kwaye wenze le mini umntu ekhumbulekayo.
Kukho nto na imvakalelo wasemzini kuthelekiswa uthando. Ungaze bazibandakanye kulo nayo. Uthando emphefumlweni ehlambulukileyo. Fumana ukuzibophelela, nesiqiniseko, chaza uthando lwakho.
Ungafumana into eninzi yamadoda neyabafazi sele uqalile uthando ayithiyileyo njengoko amanye amadoda ezingachanekanga namantombazana bonke kuzaliseke. Ukuba nothando nabani na efana nale, uze ubanike ixesha labo, nokuzethemba yabo, ke avumele ukuba afumane nentembelo uthando, ukudala baqonde ukuba wonke umntu nto ngendlela efanayo ngqo. Lo mzuzu ukuba xiya impumelelo kokufumana ithemba labo youpersonally, ngoko ibe ezithile ze aphula kwabo komongo. Musa isigqibo kuzo zonke, Bazama ukuqonda kwabo kuphela oku kuya kunika uloyiso uthando lwakho.
'Usuku lwezithandani'Lusuku ekhethekileyo ngokwenene amadoda kunye nabafazi ngothando. Ukuba lowo uye wandicebisa ethatha isicelo sakho ngoko nokuba litshatshazi, laba ngosuku oluthile kakhulu kuwe. Emva koko xa ulwalamano xa kukho into engahambi kakuhle ke khumbula namhla xa ndimbuza ngesasonwabile kangaka. ngokunxulumene nganye kunye ngasinye amahla ndinyuka, ukulwa, iinyembezi, novuyo, ithemba, uchulumanco, misinga. Kodwa sekunjalo ukuyeka ukuzama. Buhlala musani ukwenza konke okusemandleni akho ukuze agqogqa izinto ezingaphandle khona. Kuya kusoloko kuvumela ubudlelwane bakho ukuze kukhuseleke kakhulu.
ukuba Ngelishwa, xa uthe ilwa ukulahlwa kwi sicelo, ke abayi nomsindo. Wonke umntu uye zabo bhetyebhetye yakhe kakhulu ukukhethwa. Umelwe ukuba ulinde ukuvumela ezi ukwamkela kuphela isicelo sakho, kodwa ke zithande ukuba bavume kuyo ngelo ngokulula ukuya.
In isihloko ngentla, siye sikunika ulwazi ngokupheleleyo malunga kwiveki valentine 2018 ezinokubaluleka ebanzi ngosuku ngalunye lweveki valentine. Siye kubonelelwa link kakuhle afanelekileyo yonke imifanekiso imihla, nabakwaziyo, imiyalezo nemibuliso, i-SMS. Ukuba uyakuthanda eli nqaku nceda wabelane nabahlobo bakho onwabele usuku lwezithandani 2018 uthando nobumnandi.
Imisa le post elihle ibinzana emangalisayo ukuba "akazange alindele ixesha elifanelekileyo ukwazisa umntu ukuba uyabathanda unobangela ixesha lokuba nabani na, loo nto ngoku. "Ngoko ke ukuvumela le Valentine i-Day zikunikeza ukuba ubeneka ukuxoxa iimvakalelo zakho kakhulu umelwe kukuba le 1 umntu lowo bakholwayo awukwazi ukuphila ngaphandle. Sinqwenelela wonke umntu unyaka Happy kakhulu nosuku lweValentina 2018 kwangaphambili kwaye linethemba lokuba wonke umntu ufumana iqabane umphefumlo lokwenyaniso! Ukuze updates ngaphezulu, uhlale uhlobene!